Ishibhile ye-OEM Valve nefektri efanelekayo nabaphakeli | I-Ouzhan
I-Brass ingxubevange eyakhiwe ngethusi ne-zinc, futhi iyinto ekahle yokukhiqiza izingxenye ezenziwe ngomshini (kufaka phakathi izingxenye ezihlanganisiwe). I-die casting isifushanisiwe njengokwakha, okuyindlela yokusakaza lapho uthelwa khona ingxubevange yensimbi egumbini lokucindezela, umgodi wesikhunta sensimbi ugcwaliswa ngejubane elikhulu, futhi i-alloy liquid iyaqina ngaphansi kwengcindezi yokwenza ukusakaza. Inzuzo ka-Ouzhan bekulokhu kungokwezifiso ze-valves zethusi, okungukuthi, ama-valve enziwe ngethusi, okuyizingxenye zezimboni. Inqubo yokukhiqiza yaqala ithuthukiswe yiNingbo, iZhejiang eChina.
I-OEM yethusi Valve nokulinganisa izingxenye ezi-precision zethusi zokwakha izingxenye zemishini
I-Brass ingxubevange eyakhiwe ngethusi ne-zinc, futhi iyinto ekahle yokukhiqiza izingxenye ezenziwe ngomshini (kufaka phakathi izingxenye ezihlanganisiwe). I-die casting isifushanisiwe njengokufaka, okuyindlela yokusakaza lapho uthelwa khona ingxubevange yensimbi egumbini lokucindezela, umgodi wesikhunta sensimbi ugcwaliswa ngejubane elikhulu, futhi i-alloy liquid iyaqina ngaphansi kwengcindezi yokwenza ukusakaza. Inzuzo ka-Ouzhan bekulokhu kungokwezifiso ze-valves zethusi, okungukuthi, ama-valve enziwe ngethusi, okuyizingxenye zezimboni. Inqubo yokukhiqiza yaqala ithuthukiswe yiNingbo, iZhejiang eChina. Ngasekuqaleni kwawo-1980, iNingbo, isifundazwe saseZhejiang sahola ekwakheni izinqubo zokukhiqiza, ezashintsha umlando omude wokusebenzisa ama-valve wensimbi eChina. Enqubeni yokukhiqiza, inqubo yokubumba isihlabathi yaqala ukwamukelwa, futhi inqubo yokwakha yashintshwa ekuqaleni kwawo-1990. Ukuthuthuka ekuqaleni kwekhulu lama-21, iChina yathuthukiswa yaba isikhungo sokukhiqiza i-valve emhlabeni wonke.I-Ouzhan inenzuzo ephelele ekukhiqizeni ama-valve wethusi, athengiswa emhlabeni jikelele.
Nokufakwa Ouzhan Valve futhi Pipe nokufakwa izingxenye egcizelele ukubonisa
Izinzuzo Shanghai Ouzhan zethusi izingxenye kokuzihlanganisa:
Lula -Superior ukucutshungulwa
Izici -Good mechanical and processability
Izilinganisi zethusi ezenziwe ngokwezifiso kanye nokufakwa kwepayipi ekwakheni izingxenye zemishini
Izinto I-Brass, Insimbi engenasici, i-carbon steel, njll. Ithusi elinconywe kakhulu
Ukwelashwa komhlaba Ukwelashwa ebusweni bethusi kungenziwa egcizelele ngokuvumelana nezidingo zakho, ezifana electroplating inqubo, inqubo enamathela ngegolide, inqubo umbhalo, electrolysis
Ukusetshenziswa Amapayipi okuhlinzekwa kwamanzi namapayipi okuhambisa amanzi, amapayipi lukathayela, amapayipi wenyoka, amapayipi avumayo, izimbotshana zezinhlamvu kanye nemikhiqizo ehlukahlukene eyindilinga yokushaya, izingxenye ezincane zehadiwe, njll.
Langaphambilini Umakhi waseChina cnc ngokwezifiso izingxenye zensimbi zensimbi zekhabhoni